Guddoomiyaha Degmada Marka oo ka hadlay howlgalllo ciidamada Xoogga ay ka fuliyeen Marka. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Guddoomiyaha Degmada Marka oo ka hadlay howlgalllo ciidamada Xoogga ay ka fuliyeen...
Guddoomiyaha Degmada Marka oo ka hadlay howlgalllo ciidamada Xoogga ay ka fuliyeen Marka.
Guddoomiyaha degmada Marko ee Xarunta Gobolka Sh/hoose Cabdullaahi Cali Axmed Waafow oo la hadlay Warbaahinta Qaranka ayaa faahfaahin ka bixiyey Weerar Gaadmo ah oo ay isku dayeen Kooxda Aragagixisada Alshabaab in ay la beegsadaan Ciidanka Xooga dalka ee Ku sugan Magaalada Marka.
Gudoomiyaha ayaa sheegay in Ciidamada xilliga la soo weerarayay ay ku jireen feejignaan, lagana war hayey weerarka ay soo qaadeen Maleeshiyaadka Al-Shabaab, Taas oo sahashay in dhibaato xoogan loo geystay Maleeshiyaadkii Weerarka Soo qaaday.
Gudoomiyaha ayaa sheegay in Ciidanka Xooga Dalka ay ku daba jiraan Baxsadka Maleeshiyaadkii Weerarka Soo qaaday isla markaana ay howlgallo iyo dhaqdhaqaaqyo Ciidan oo xoogan ka wadaan Duleedka Magaalada Marka.
Amniga Magaalada Marka ayaa Mudooyinkanba ahaa mid aad u xasilan , Ciidanka Xooga Dalka ee Ku sugan Magaalada Marka ayaan Xil adag iska saaray sidii ay Shacabka Ku dhaqan Magaalada Marka ugu noolaan lahaayeen nabad iyo xasilooni.
Previous articleWasiirka ganacsiga Soomaaliya oo ka qayb galay bandhiga Carweedka ganacsiga ee ka furmaya dalka Suudaan
Next articleMarwo Asha Gelle Diriye oo la kulantay Soomaalida Ohio